आरडीटी परीक्षण नगर्न सुझाव : क्वारेन्टिनमा बसेकाको पीसीआर नगर्दा जोखिम बढ्दै - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home प्रमुख आरडीटी परीक्षण नगर्न सुझाव : क्वारेन्टिनमा बसेकाको पीसीआर नगर्दा जोखिम बढ्दै
शुक्रबार मात्रै सुर्खेतको क्वारेन्टिनमा बसेका एक युवाको आरडीटीमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको थियो । तर, उनको मृत्युपश्चात् पीसीआर परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । सरकारले क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका सबैको पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्ने माइक्रोबायोलोजिस्टको जोड छ ।
त्रिवि माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्राडा. मेघराज बन्जाराले नेपालमा हाल प्रयोग भइरहेको आरडीटी कीट गुणस्तरहीन रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपालमा प्रयोग भइरहेको आरडीटी टेस्ट गुणस्तरयुक्त छैनन् । आरटीपीसीआरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले १ लाख ६६ हजार ७ सय ६५ जना क्वारेन्टिनमा बस्दै आएको जानकारी दिए । हालसम्म ८८ हजार ३ सय ६६ जनाको मात्रै आरटीपीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ ।
‘नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन फर कोभिड–१९’ मा क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका र कोरोना भाइरसको कुनै लक्षण नदेखिए नागरिकलाई घर पठाइने उल्लेख छ ।
यद्यपि, हालका लागि क्वारेन्टिनमा बस्दै आएकाहरूको आरडीटी परीक्षण गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकामा हाललाई क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूको १४ दिनपछि आरडीटी परीक्षण गर्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २० जेठमा निर्देशिका जारी गरेको थियो । पहिलो प्राथमिकतामा संक्रमण फैलिएको समुदाय, आइसोलेसनमा बसेका व्याक्तिहरू र संक्रमितसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिने योजना बनाइएको छ ।
यस्तै, दोस्रो प्राथमिकतामा फ्रन्ट लाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, दीर्घरोग भएका बिरामीहरू र अस्पतालमा काम गर्ने एम्बुलेन्स चालक र अन्य कर्मचारी रहने उल्लेख छ । तेस्रो प्राथमिकतामा लक्षण भएका नागरिक पर्नेछन् । निर्देशिका अनुसार कुनै लक्षण, ट्राभल हिस्ट्री नभएको र आफंै परीक्षण गराउन पुग्नेहरू टेस्टिङ प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।
विश्वस्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस पह्चिानका लागि प्रयोग नगर्न भनेको कीट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले थप १ लाख ५० हजार थान ¥यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट कीट (आरडीटी) खरिद गर्ने तयारी थालेको छ । हालसम्म १ लाख ३२ हजार ९ सय ६६ जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ ।
थप २७८ मा संक्रमण, मृतक ११ पुगे
शुक्रबार थप २ सय ७८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ । सोसँगै संक्रमितको संख्या २ हजार ९ सय १२ जना पुगेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार देखिएका संक्रमितहरूमध्ये २ सय ६७ जना पुरुष र ११ जना महिला छन् ।
संक्रमितमध्ये ३ सय ३३ जना उपचारपछि निको भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार हालसम्म देशका ६८ जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ । यस्तै, सुर्खेतमा थप एक जना कोरोना भाइरस संक्रमितको मृत्यु भएसँगै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ११ पुगेको छ ।